EEYYEEN GUDDANNEERRA! – Beekan Guluma Erena
EEYYEEN GUDDANNEERRA!	Beekan Guluma Erena
Poems April 25, 2016BEEKAN GULUMMAA IRRANAA
Humna ibsaa malee ibsaan tasa hin jiru
Dukkana ifatti halkan kan jijjiru.
Nuti garuu jirra halkan ofii ifnee
Aarii humna ibsaan ofumaa bobaanee.
Bishaannis hin jiru torbanitti dhugna.
Osoo hin dhiqatin dibataan urgoofna.
Networkiin hin jiru hawwin wal agarra.
Tola qarshii baafnee warra Teelee soorra.
Digirii qabannee hundaa gadi bulla
Coccobdu egganna kan warra wallalaa.
Qarshii kuma tokkon ji’a dabarsina
Guyyatti tokko nyaanne hattuu sooromsina.
Fuggisoodhaan bulla seerri garagalee
Dhugaan qummunere sobni isa caalee.
Eeyyen guddannerra seera jijjirrerra
Matta’a yoo fudhatte tasa hin himatamtu
Hiyyessa yo mite yakkamaa hin jedhamtu
Kanaafu guddachuf dhugaa soba goota
Sammu kee gurgurte Anga’ota aferta
Hiyyeessa boossifte gamoo ijaarratta
Biyyatti dhukee hartee ofii Adii Uffatta
Eyyee guddannerra baay’ee jijjiramne
Yoo dhugaa dubbatte yakkaan himatamta
Beekumsa yoo qabatte guufuu biyyaa taata
Digrii yoo qabatte doofatu si ergata
Ajaja isaan baatee ulullee isaan galta
Soba lama sadiin barcuma argatta.
Eeyye guddannerra guddinni akkas taanan
Biyya Hangas Bal’attu BOOLEEN bakka bunaan
Eyye guddannerra guddina laamsha’aa
Oduu dhaan bargagee sammudhaan Raata’aa.
Lakkofsaan faayyame Kan dijitii lamaa
Waraqaan diriree oduuf barreeffama
Hiyyeessi bututaan Taligaan durooma
Kanaafu hiriyee hiikkaa biyya keenyaan
Eyyee guddannerre guddinni Oduu taanan.
Hiriyaa walin baranne tokkotu Amerikaati naaf Bilbilee, waggaa 12 dura kan biyyaa ba’ee,,,,,,, “TEELEVIZIYOONAAN BOOLEE” argee baayyee guddatte biyyii jedhee dinqisifate natti odeessa..aniis waanan jedhu dhabeen walaloo kanaan deebii isaaf deebisuf murtesse …
Orolliyaana Daani’eel – Bara 2016
← Mosee Hongee Dandamatu (Akkamiin deemti silaas Wayyaaneen)
NURRAA GALA DIINNI !! →